ई.प्रशान्त घिमिरे | गृहपृष्ठ
Home शिक्षा ई.प्रशान्त घिमिरे
on: July 23, 2012 शिक्षा
सहप्राचार्य, एडभान्स इञ्जिनीयरिङ कलेज
नेपालीको बौद्धिक स्तर विश्वमै उत्कृष्ट छ
अहिले नेपालका इञ्जिनीयरिङ कलेजको अवस्था कस्तो छ ?
स्वदेशमा इञ्जिनीयरिङ विधाको पढाइ शुरू भएको ५० वर्ष पुगेको छैन । झन् निजीक्षेत्रको प्रवेश त दुई दशकअघि मात्रै भयो । हाम्रो एडभान्स इञ्जिनीयरिङ कलेजको कुरा गर्ने हो भने १२ वर्षअघि स्थापना भएको हो । विकासक्रममा शिक्षाक्षेत्रका लागि एक दशकको समय भनेको अत्यन्त न्यून हो । छिमेकी देश भारतमा पनि ३० वर्षदेखि शिक्षाको विकासले तीव्रता पाएको छ । हामी त अझै पनि ‘स्ट्रगलको बेस फेज’मै छौं । तैपनि कलेजहरूको प्रतिस्पर्धा र विद्यार्थीहरूको आकर्षण दुवै बढेकाले हाम्रो स्तर क्रमशः सुधारको बाटोमा छ ।
नेपालमा प्राध्यापन क्षेत्रभन्दा अन्य पेशालाई महत्व दिने गरिएको छ । नेपालका राष्ट्रिय नीतिहरूले प्राध्यापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । यसकारण योग्य मानिसहरू पढाउनभन्दा अरू नै पेशा अँगाल्न उद्यत छन् । एउटै शिक्षकले धेरैओटा कलेजमा प्राध्यापन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यहाँको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै त्यही हो– गुरुहरू धेरै लामो अनुभव बोकेर नेपालमै बस्ने सम्भावना न्यून छ । अरू भौतिक पूर्वाधारको कुरा त विस्तारै सुधारको बाटोमा छ ।
नयाँ विद्यार्थीले इञ्जिनीयरिङ किन पढ्ने ?
यसमा नयाँनयाँ अवसर छन् । साथै, नयाँनयाँ ‘आइडिया’ खुल्छ । सोच्ने तरीकामा फरकपन आउँछ । धेरै वैकल्पिक अवसर प्राप्त हुन सक्छ । एकैपटक धेरै विषयको अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले जुनसुकै विधामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता विकास हुन्छ । इञ्जिनीयरका लागि संसारभर रोजगारीका प्रशस्त अवसर छन् । अर्को कुरा अरू प्राविधिक विषयभन्दा यो विषय पढ्न सस्तो पनि छ । उड्डयन र मेडिकल मात्रै होइन, व्यवस्थापनका कतिपय कोर्स पनि इञ्जिनीयरिङभन्दा महँगा छन् । त्यसले पनि यसप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढेको पाइएको छ । हामीले अहिले स्नातक तह (बीर्ई)का लागि ६ लाख २५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेका छौं ।
विद्यार्थीहरूको रोजाइ कुन विषयमा बढी पाउनुभएको छ ?
विद्यार्थीहरूको प्राथमिकता त समयअनुसार परिवर्तन भइरहन्छ । कतिपय विद्यार्थी त्यस्ता हन्छन्, उनीहरूले पहिलेदेखि नै कुनै विषय रोजिसकेका हुन्छन् । उनीहरूलाई कुनै चिजले प्रभावित बनाइसकेको हुन्छ र त्यस्ता विद्यार्थीहरू आफ्नो निर्णय परिवर्तन गर्दैनन् । कतिपय विद्यार्थी त्यस्ता पनि हुन्छन्, जसको कुनै रोजाइ हुँदैन र लहलहै वा बजारको प्रचारबाजीले विषय छनोटमा प्रभाव पार्छ । उनीहरू बजारको अवस्था मूल्याङ्कन गरेर विषय रोज्ने गर्छन् । विद्यार्थीको आर्थिक हैसियतले पनि प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । पछिल्लो एक दशकलाई हेर्ने हो भने पनि विषय छनोट चक्रीय गतिमा छ । पहिले कम्प्युटर इञ्जिनीयरिङमा धेरै विद्यार्थीको आकर्षण थियो । पछिल्ला वर्षमा सिभिल इञ्जिनीयरिङप्रति आकर्षण बढेको पाइएको छ । हालका दिनमा इलेक्ट्रिक–इलेक्ट्रोनिकतर्फ विद्यार्थीको ध्यान तानिएको छ । अहिले जमाना साह्रै प्रतिस्पर्धात्मक भइसक्यो । त्यसकारण क्षमतावान् विद्यार्थीले जुनसुकै विषयमा ‘डिग्री’ लिए पनि भविष्य राम्रो छ । अन्यथा, कहीँ पनि भविष्य छैन ।
नेपाली इञ्जिनीयरको भविष्य कहा छ, नेपालमा कि विदेशमा ?
के प्राप्त हुनुलाई राम्रो मान्ने भन्ने पहिलो प्रश्न हो । धेरै पैसा कमाउने, अरूभन्दा भिन्न जीवनशैली अपनाउने हो भने विदेश नै राम्रो होला । विदेशमा धेरै सम्पत्ति कमाएर स्वदेश फर्केपछि कुनै व्यवसाय गर्ने हो भने राम्रो हुन्छ । कतिपय मान्छेहरू स्वदेशमै बसेर खुशीसाथ जीवनयापन गर्न चाहन्छन् । तुलनात्मक रूपमा आममानिसको भन्दा इञ्जिनीयरको जीवनशैली केही सजिलो हुन्छ । त्यसमा पनि परिवारसँगै बस्न रुचाउनेहरूका लागि स्वदेश नै ठीक छ । त्यसकारण मानिस के कुरामा सन्तुष्ट हुन सक्छ, त्यो नै ठूलो कुरा हो ।
स्वदेशका कतिपय ठूला आयोजनामा विदेशी इञ्जिनीयरहरू भर्ती गरिन्छ । नेपाली इञ्जिनीयरको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कम भएर हो ?
यस्ता आयोजनाहरू त्यहाँ आउने लगानी र सहायताको साथमा केही गौण पक्षहरू रहन्छन् । देखिने कुरा एउटा हुन्छ, तर त्यसको सारतŒव अलग्गै हुन सक्छ । कतै न कतै फाइदा नभई कसैले पनि अनुदान वा सहायता दिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसकारण हाम्रा इञ्जिनीयरहरू प्रतिस्पर्धात्मक छैनन् भन्नेमा म विश्वास गर्दिनँ । हो, एकदमै उच्च कोटीको कामका लागि हामी अझै पनि प्रतिस्पर्धात्मक हुन सकेका छैनौं । त्यसका लागि हामीले अझै धेरै चरण पार गर्नुपर्छ । यसका लागि राज्यले पनि नीति बनाउनुपर्छ । ठूलो लगानी हुनुपर्छ । प्रतिस्पर्धाका दायराहरू बनाउनुपर्छ । नेपालका ठूला आयोजनाहरूमा हुने लगानी वैदेशिक अनुदान वा सहुलियत ऋणमा आधारित छन् । ती दाताहरूले भरसक यहाँका आयोजनाबाट आफ्नै देश र नागरिकले फाइदा लिऊन् भन्ने चाहन्छन् । यहाँ आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ । नेपाली इञ्जिनीयरहरू दक्ष छैनन् भन्नेचाहिँ होइन ।
नेपाली कलेजले प्रयोगात्मकभन्दा सैद्धान्तिक पक्षलाई बढी प्राथमिकता दिन्छन् भनिन्छ नि ?
कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक अवस्थाले खेलकुदको अवस्थालाई प्रभावित पार्छ । त्यस्तै, अहिले इञ्जिनीयरिङमा जति लगानी भएको छ, त्यो यसका लागि पूर्ण नभएको हुन सक्छ । तर, सुधारको अवस्था निकै उत्साहजनक छ । आधारभूत अवस्थामा पढाइ शुरू गरेका कलेजले प्रयोगशालाहरू बनाइसकेका छन् । हामीकहाँ इञ्जिनीयरिङको छोटो इतिहास भएको र सकारात्मक दिशामा बढेकाले शङ्का गर्नुपर्ने स्थिति छैन । प्राथमिक शिक्षामा आममानिसको पहुँच पुग्न नसकेको हाम्रोजस्तो देशमा राज्यले उच्चशिक्षालाई सबैभन्दा बढी महत्व देओस् भन्ने अपेक्षा कसैको पनि छैन ।
यद्यपि, हाम्रा विद्यार्थीहरूले केही अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा चीन र भारतको तुलनामा उत्कृष्ट नतीजा ल्याएका छन् । यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ, यहाँको पढाइको स्तर र विद्यार्थीको क्षमतामा खोट लगाउने ठाउँ छैन । म दाबीका साथ भन्न सक्छु, नेपाली भूमिमा जन्मिएका मान्छेको बौद्धिक स्तर औसतमा संसारमै राम्रो छ । जहाँसम्म प्रयोगात्मकको कुरा छ, यहाँ त प्रविधि लागू गर्ने ठाउँ नै भएन । दशकौंदेखि हामीले एउटा मेलम्चीको कुरा गरिरहेका छौं । तर, अझै त्यो आउने छाँटकाँट छैन । आवश्यकताले प्रविधिलाई परिचालन गर्ने हो । पूर्वाधार र औद्योगिक विकास हुन नसकेकाले नेपालमा प्राविधिक क्षेत्र पनि विलखबन्दमा परेको छ ।
प्रविधिको विकासका लागि राज्यले के गर्नुपर्छ ?
राज्यले ठूलो सङ्ख्यामा प्राविधिकहरू खपत गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुप¥यो । कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भनेर स्पष्ट नीति लिनुप¥यो र त्यसमा लगानी गर्नुपर्‍यो । जस्तो कि, नेपालमा जूटको प्रशस्त सम्भावना छ । आगामी दशक जूट प्रवद्र्धन गर्ने वा जलविद्युत् विकासमा उपलब्धि हात पार्ने भन्ने लक्ष्यसाथ राज्य अघि बढ्नुपर्‍यो । त्यस्ता नीतिले मात्र समग्र आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनहरू ल्याउँछ र सँगसँगै प्रविधिको पनि विकास हुन्छ ।
देशले जस्तोसुकै नीति लिए पनि इञ्जिनीयरहरूले त्यसलाई सफल बनाउन सक्छन् । स्पष्ट दिशामा हिँडेका चीन, कोरिया, भारत सबैले विकासमा ठूलो फड्को मारिसके । हाम्रो इतिहास हेर्ने हो भने पनि गोर्खाली फौज भनेपछि संसारमै वीर थिए । त्यतिबेला पनि एउटा लाइनमा त हिँडेका रहेछन् नि नेपालीहरू । तर, अहिले त हाम्रो लाइन के हो भन्ने नै थाहा छैन । हामी उथलपुथलको अवस्थामा छौं । यसले संसारमा हाम्रो पहिचान नै सङ्कटमा परेको छ । त्यसकारण एउटा दिशा पक्रेर अघि बढ्नुपर्छ ।